Aluminium Checkered Plate Tread Factory - China Aluminium Checkered Plate Tread Abakhiqizi, abahlinzeki
Abakhiqizi be-Premium China Aluminium Checkered Plate Sheet
Thola amadili amahle kakhulu kuma-premium quality aluminium checker tread plate kusuka kubakhiqizi abahamba phambili i-RuiYi Aluminium. Sinikeza bonke osayizi bamapuleti e-aluminium ngentengo enhle.
Ipuleti le-aluminium iphethini futhi luhlobo lwento yensimbi, futhi idinga ukuvikelwa ngezindlela zesayensi ekusebenzeni kwansuku zonke. Phezulu kohlu, ukuhlanzwa njalo, amabala angaphandle kufanele ahlanzwe ngamanzi noma nge-remover stain ehambisanayo. Izinsalela zamabala zizomane zenze ukuguqulwa kokugqwala kweshidi.
Kunezinhlobo ezahlukahlukene zensimbi yensimbi ye-aluminium, amamaki eshidi le-aluminium asho ukuthi uhlobo ngalunye lwensimbi yensimbi ye-cast inezinzuzo zayo ezikhethekile eziphakeme. imikhiqizo yethu eyinhloko ye-aluminium kufaka phakathi i-1000 chungechunge ye-aluminium amamaki afana ne-1050, 1060, 1100 ipuleti ye-aluminium, uchungechunge lwe-3000 olufana ne-3003 aluminium plate kanye ne-8011 aluminium plate.
Intengo yepuleti ye-Aluminium imvamisa incike kunani lentengo ye-aluminium alloy kanye nezindleko zokukhiqiza. Amakhasimende angasesha intengo ye-aluminium alloy ku-Intanethi futhi manje inani lentengo eligunyazwe kakhulu yi-LME (London Metal Exchange). Ngaphezu kwalokho, into eyodwa okufanele inake iyunithi yemikhiqizo ye-aluminium, amayunithi wesisindo ajwayelekile angamathani, amakhilogremu kanye namaphawundi ngenkathi amayunithi wobude obujwayelekile eyi-gauge, mm ne-intshi.
Ukuphikiswa Kokugqwala Okuphakeme kakhulu 6061 T6 Aluminium Tread Plate
Idizayinelwe ukusetshenziswa ku-aerospace, ukufakwa, ama-valve, imiphini yokushayela, ukuhlangana, ukwakheka, izimpawu, kanye nokusetshenziswa kolwandle Ipuleti lokunyathela i-aluminium engu-6061 T6 inokumelana nokugqwala okuphezulu kunawo wonke ama-aluminum aphathwe ukushisa. Kuyinto ingxubevange eyenziwe nge-silicon ne-magnesium. Inamandla aphansi kunamanye ama-aluminum angaqhathaniswa, kepha isasetshenziswa kabanzi.
I-Excellent Rust Resistance Aluminium Checkered Plate Metal
I-aluminium yokunyathela ipuleti ingasetshenziselwa izinhlobonhlobo zokwakha nezinjongo zokwakha. Lokhu kungenxa yekhwalithi yayo engasindi, eqinile, ephansi yesondlo. Amapuleti e-Aluminium Checkered iphaneli lensimbi elincane elisetshenziswa njengamapaneli wokuhlobisa ezakhiwo.
I-Diamond Tread Pattern Slip-Resistant Aluminium Sheets Factory
Uchungechunge i-1000 aluminium alloy yaziwa nangokuthi "i-aluminium ehlanzekile yezimboni", enokusetshenziswa okubanzi kakhulu ezindaweni eziningi, njengemboni, izakhiwo, izakhiwo zokuhlobisa, ezasolwandle, izindiza, njll. Izinzuzo ezikhethekile zalolu chungechunge lwe-aluminium ziningi zepulasitiki futhi ukuqhuba kahle kagesi. Indlela yokuqokwa kwe-aluminium alloy igcwele futhi ingenziwa ibhulashi, ipholishiwe, iphrintiwe, ifakwe embossed, icindezelwe, ikathayela noma eminye imikhiqizo ye-aluminium.
Ukuba nekhono elihle lokwakha, lokubhola nokushisela, i-Aluminium Diamond Plate kulula ukuyenza futhi iphethini layo eliphakanyisiwe ledayimane linikezela ukumelana okuhle. Manje sigcina osayizi abakhethiwe ku-FTQ noma ku-Fire Truck Quality Diamond Plate enama-grooves aqoshwe phezulu kwedayimane ngokuthwebula okwengeziwe.